श्रीमानको मृत्यु पछि काजकिरियामा बसेकी नर्सले मलिन स्वरमा भनिन्- दाजु मैले मेरो छोरालाई के उत्तर दिने? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/श्रीमानको मृत्यु पछि काजकिरियामा बसेकी नर्सले मलिन स्वरमा भनिन्- दाजु मैले मेरो छोरालाई के उत्तर दिने?
श्रीमानको मृत्यु पछि काजकिरियामा बसेकी नर्सले मलिन स्वरमा भनिन्- दाजु मैले मेरो छोरालाई के उत्तर दिने?
विगत एकवर्ष देखि क्यान्सर रोगसँग लड्दै आएका आफ्नो श्रीमानको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि आफ्नो अबोध छोरालाई बाबू खोइ मामु भन्दा के जवाफ दिने दाजु भन्दै चिन्तित अवस्थामा अहिले काठमाण्डौंको पशुपति क्षेत्रमा काजकिरियामा बसेकी नर्सले मलिन स्वरमा उनले भनिन् ।
भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा कोभिड वार्डमा कार्यरत नर्स सुनिता कुमारी सहकारीका श्रीमानको काठमाण्डौंको पाटन अस्पतालमा उपचार गराउने क्रममा ५ दिन अगाडि मृत्यु भएको थियोे । उनी अहिले काठमाण्डौको पशुपति मन्दिरमा आफ्नो श्रीमानको काजकिरियामा बसेकी छिन् ।